राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजा ३ दिनमा, फागुन १० भित्र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने
काठमाडौँ, ३० पुस - निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसदलाई पूर्णता दिने क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र तुल्याएको छ ।
–नारायण न्यौपाने/ रासस
ख्याल गर्नुभएको छ ? कानेगुजीले बताउँछ तपाईंको स्वास्थ्य कानेगुजीलाई बेवास्ता नगर्नुस् । यसले एमआरआई र एक्सरे नगरिकनै तपाईंको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा बताइदिन्छ । १ तपाईंको कानेगुजीले गर्दा कान असाध्यै चिलाउँछ र तपाईं कान कन्याइरहनुहुन्छ...
डा. केसीलाई ओलीको प्रश्न– गर्न खोज्या के, मुड्की बटारेर सत्याग्रह हुन्छ ?